Fiximaha iyo talooyin loogu talagalay goobaha cfg ee FSX
Su'aal Fiximaha iyo talooyin loogu talagalay goobaha cfg ee FSX
Bilood 11 3 maalmood ka hor #973 by DRCW
Mar labaad haddaba,
Si aan uhesho jaangooyooyin cusub waxaan isku soo dubaridey qaar ka mid ah hababka loo yaqaan 'flyer' si aad u sii wado taariikhda (Graphics wise). Marka hore
qaybta ayaa ku siin doonta farsamooyinka ugu muhiimsan ee looga baahan yahay FSX. Haddii aad hayso FSX Steam Edition uma baahnid inaad sameyso qaybtan koowaad.
(Qalabahan waxaa loogu talagalay nidaamyada leh qufool ama afarlayaasha 'CPU' iyo ugu yaraan 4 RAM RAM ama ka wanaagsan)
Si kale haddii loo dhigo, nidaamyo casri ah oo badan.
Qaybta koowaad: waxaa loo yaqaan '& loo baahan yahay isbedel
Ugu horreyn waxaan u baahannahay inaan helno ugu weyn Faylka FSX faylka ( Hubi inaad sameysay daaqado si aad u muujiso faylasha qarsoon iyo faylasha )
Dooro Start / Computer / C: / Users / Magacaaga ama kombiyuutarka magaca / Appdata / Raadinta / Microsoft / FSX
Markaad furto FSX Folder ka raadi fsx.cfg feyl una fur furahaaga farriin. Waa inay sidan u egtahay:
UISPA = 1
InfoBrakesEnable = Run
InfoParkingBrakesEnable = Run
InfoPauseEnable = Run
InfoSlewEnable = Run
InfoStallEnable = Run
InfoOverspeedEnable = Run
WideViewAspect = Run
Istaandarada = Diyaarad, Helikobter
SimObjectPaths.4 = SimObjects \_ Xayawaanka
Maximed = 1
Goobta = 421,0,1740,1036, \_\_. \_ DISPLAY1
Mode = 1920xXXUMXx1080
Dherer = 1,2
Heerka = 1,3
Madaxa = 1,4
SITUATION = C: \_ Users \_ Darrin \_ Dukumiinti \_ Duulin Simulator X Files \_ 737
DooranAircraftManufacturer = Dhammaan
DooranAircraftPublisher = Dhammaan
SelectAircraftType = Dhammaan
Guud = 0.000000
UnlimitedFuel = Been
TrueAirspeed = Run
AutoCoord = Run
RealMixture = Been
StressDamage = Run
Jeffect = Run
Qoraal gacmeed = Qalad
GyroDrift = Been
CrashWithDyn = Been
CrashDetection = Run
AutoTrim = Been
AllowEngineDamage = Been
MAGAALADA = Twin Falls
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_01_gate.Gir.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_08_gate ka baxaya. GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_10_safety fariin .GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_17_begin.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_20_taxi albaabka. GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_21_gate imaanshaha. GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ boodi brakes_Sound.GAU.aqrreuwiutqzttebzkrqncewurhnactlnwktwrbi = 2
Waxaan ku bilaabi doonaa qaybta soo bandhigida. Haddii aad isticmaalaysid Mashiinka LCD ama wax kasta oo sahlan, markaas waxaan rabnaa inaan bedelno kuwan soo socda ee ku yaal [Display] Section.
WideViewAspect = Been
Isbedel Xaqiiq ah
Xagga hoose ee [Sawiro] qaybta ku dar waxyaalahan soo socda:
HIGHMEMFIX = 1 waa midka ugu muhiimsan ee u ogolaanaya FSX in ay kor u qaado tp 4 on VAS (Cinwaanka Farsamada) Haddii aad isticmaaleysid muuqaal-muuqaal iyo diyaarad
autogen iyo kuwa kale oo adag oo midigta adag. Khadkan ku daray feylkaaga faylka ayaa kaa caawin doona kahortaga OOM ( qaladaadka xusuusta ) Waa kuwee caan ka ah FSX. The Steam
Xilliga hore waxaa ku jira isbeddelkan adiga kugu haboon.
Sidoo kale waxaan kugula talineynaa inaad soo dejiso Hanaanka Hawlaha at www.sysinternals.com . Qalabkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad la socoto oo aad fahanto isticmaalka VAS intaad ku jirtid duulimaad
si aad u aragto sida FSX ay u maareynayso ilahaaga nidaamkaaga. Waxaa lagu qori doonaa si fudud VS ( meel bannaan ) Waxaad sidoo kale arki doontaa isticmaalka qalabka cabbirka iyo RAM.
Fahamka geeddi-socodka ayaa kaa caawin doona inaad sameysid FSX duulimaadyo dheer oo aan ka cabsi qabin OOM inay dhacaan ka dib markii saacad 10 ah oo ku saabsan habka ugu dambeeya.
Dhamaanteen dhamaanteen waa inaynu ujirannaa inaan aragno 64 qaybta simulator duulimaadka, laakiin illaa iyo xilliga 4 ee VAS ayaa ah kuwa ugu fiican inay sameeyaan.
Sidoo kale hoosteeda b] TABABARKA [/ b qaybta waa khadka soo socda:
Isbedelka 2048 ama 4096
By default FSX ayaa loo dhigay 1024 sida caadiga ah oo aan ahayn Qeexida Heerka sare. Xaqiiqdii ma ku raaxeysan kartid sawirro HD-ga ah kumbuyuutarkaaga. Diyaaradaha qaarkood adiga
Download (lacag bixinta) ma muujin doonto kartidaas haddii aadan haysan khadkanaga dhigay 4096. Mar labaad Baabuurka Buugga horeyba waa horey loogu soo diyaariyay 4096 default. Waxaad awoodi kartaa
sidoo kale isku day 2048 oo weli ah HD. Waxay ku tiirsanaan doontaa fps (shariikadaha halkii labaad) Fiiri: Haddii aad bedesho goobahaaga (gawaarida) ee FSX waxaad u baahan doontaa inaad dib u dhigto hal xariiqan
maxaa yeelay waxay dib ugu noqoneysaa default 1024.
Kor ku xusan waa xeerka guud. Waa inaad bilowdaa FSX ka dib markaad 3 ka badasho isbeddelka, isla markaana ku soco duulimaad gaaban oo ka baxsan aag aad caadi u duuli karto. Waan ogahay inaad arki doonto a
Qeybta 2: Dhaqdhaqaaqyada hareeraha guud ee hagaajinta.
Waxaan kugula talin karaa mid kasta oo ka mid ah isbeddeladan soo socota ee aad FSX maamusho sidaas darteed haddii aad wax ka qabato fps waxaad kaliyoo xiran kartaa barnaamijka oo aad dib ugu celin kartaa xariiqda dib u celinta. Xaqiiqdii
waxay kuxirantahay nidaamka aad ku jirto FSX. Waxaan haystaa processor 8 Core oo leh 2 high grafik kaararka ku shaqeeya qoryaha iyo 16 gigska RAM oo sarreeya.
Kuwa soo socda ayaa ah www.simforums.com/forums/new-twea...25507.html
Tweak # 1 - Jajabka Frame Frame
Si loo yareeyo sababta keentay blurries, Microsoft ayaa ka shaqaynaysay sida qorshe hawleenta Flight Simulator X mudnaanta hawlaha asaasiga ah ee FSX. Waqtigan xaadirka ah ee CPU waa wax badan
oo u go'an in lagu dhejiyo xogta muuqaalka, oo ay ku jiraan textend textures, kharashka qadar yar oo hooseeya. Fikradayda, isbedelkan ayaa inta badan xalliyay arrintan
guluubka, inkastoo xajistaha dabiiciga ah ay wali ka dambeyn karaan heerarka hooseeya ee hooseeya (oo ka yar 10 fps) ama xawaaraha sare ee hawada (ka dhaqso badan 600 xirmooyinka). Waxaa jira
dhowr siyaabood oo loo xakameynayo inta jeer ee CPU FS waxay u heellan tahay in lagu raro goobaha iyo qaababka. Habka ugu sahlan waa inaad dejisid xajiyaha qiimaha bartilmaameedka ah ee qiimaha aad adigu leedahay
mashiinka si joogto ah ayaa loo gaari karaa. Qeybta hoose ee aad dhigto xawaaraha, wakhtiga CPU waqti badan ayaa loo rogaa ka soo jiidashada xogta. Wax kale oo aad sameyn kartid waa inaad wax ka bedesho
isbeddellada soo socda ee FSX.CFG:
FIBER_FRAME_TIME_FRACTION waxay go'aamisaa inta ugu badan ee wakhti kasta oo shaxan ah ee aan ku qaban doono shaqooyinka fiber-ka ee ku jira mawduuca koowaad. Waxaan cabbirnaa inta ay qaadaneyso in la simo oo la bixiyo ka dibna ku dhufo wakhtigaas FIBER_FRAME_TIME_FRACTION si loo go'aamiyo inta uu socdo fiilooyinka. Tusaale ahaan, haddii ay qaadatay 10 xabsiyada si ay u jilaan oo u bixiyaan FIBER_FRAME_TIME_FRACTION ayaa lagu qadaray qiimaha caadiga ah ee 0.33, ka dibna waxaan u oggolaaneynaa fiilooyinka ku jira mawduuca koowaad in ay ku socdaan ilaa 10 * 0.33 = 3.3 milliseconds. Qiimaha jajabka ee 1.0 iyo 2.0, wakhtiga la siinayo fibreerka ayaa noqon doona 10 milliseconds iyo 20 milliseconds, siday u kala horreeyaan.
[n = 0.01 - 0.99] Qalab yaryar ama nidaamyo ka fiican waxay isku dayaan 0.70
Mashiinno badan oo muhiim ah ayaa la sheegay in kor ku xusan looma baahna taasna waa sababta ay LNUMX u tahay. Waxaan isla markiiba isku dayey in aan dib u eego oo aan arko inay dhab ahaantii iga caawisay aniga. Nidaam kasta wuxuu ka duwan yahay qalabyada iyo qalabka kombiyuutarka. Sidaa daraadeed waa inaad ku dhejisaa goobo ku habboon nidaamkaaga shakhsi ahaaneed. Arrimo badan ayaa jira. Waxaan jeclaan lahaa inaan dhihi karo waxaa jira hal buug oo ku habboon xal kasta, laakiin ma jirto. Haddii aad wax ka qabato FPS (marxaladaha labaad ee sanadka) ee nidaamkaaga ka hor intaanad bilaabin jaantuska waxaan kugula talin lahaa in aad xalliso dhibaatada marka hore adoo dejinaya waraaqaha meesha ay mashiinkaagu si joogta ah u socdaan oo ku haynayaan. Mashiinkaaga ku tijaabi goobaha cufan oo isku day in aad sii wadatid feylka 0.33. Waxaad si ku meel gaar ah u dhigi kartaa xaddidaadaha fps si aan xadidneyn oo loo maamulo FSX iyada oo loo marayo dariiqooyinka, ka dibna dib ugu noqo 20fps (Qiimaha nuska ama qiimaha rikoodhada ilaalinta) Haddii aad ka fekereyso inaad noqoto mid adag oo kumbuyuutar ah markaad kumbuyuutar ku bixiso simulator jidka loo maro. Waxaad kaydin doontaa lacag badan oo ah maaliyad ahaan adigoo dhisaya nidaamkaaga.
In ka b] TERRAIN [/ b qaybtaan waa kuwan soo socda:
U beddel 6.500000 ilaa 7.500000
Qeybta kor ku xusan waxay go'aamisaa fogaanshaha FSX oo soo saaro muuqaalka (muuqaal) oo la shaqeeya TIME_FRAME_TIME_FRACTION.
Beddelidda xariiqdan waxay kordhin doontaa diiradda saaritaanka diyaaradda. (Fiiri waxay sidoo kale kordhin doontaa isticmaalkaaga VAS wax yar)
Xaqiiji in tani la dhigayo DETAIL_TEXTURE = 1
Tani waxay noqon doontaa mid deg deg ah dadka isticmaala muuqaalka sawirrada. Waxaad ka arki doontaa tufaaxa aad u fiican ee cawska dhulka hoostiisa iyo horumarinta ballaaran ee nacnaca guud ee hawada oo hoos u eegaya.
Qeybta 3: Caawinta qaadashada ka saar FSX. Waxaad ka caawin kartaa sawiradaada dheeraad ah adoo haysta kaarkaaga HD graphics kaaga qaar ka mid ah shaqadaada CPU-ga.
Waa kuwan qaar fiidiyooga waxtar leh:
Fiidiyowga soo socda wuxuu ka socdaa Flight Sim Addict iyo wuxuu ogyahay qaabab badan. Waxaan u maleynayaa inuu sidoo kale yahay xubin ka tirsan kooxda REX.
Waxaan isticmaalaa Megascenery iyo Blue Sky iyo wax badan oo ka mid ah. Tani waa sababta aan u heysto 2 TB HD loogu talagalay FSX. Inkastoo aanan u baahneyn inaan ka walwalo autogen, sawirada sawirku waxay noqon kartaa caqabad xawaaraha hooseeya marka ay timaado fiiq. Waxaan isticmaalaa sifaha kor ku xusan si kor loogu qaado nacnaca 500 ft sidaas darteed samadeyda iyo dhulgashadeyda si macquul ah.
Faa'iidada ugu weyn ee muuqaal sawir leh oo aan lahayn autogen waa isticmaalka VAS wuxuu si fiican u maamulaa iyadoo la xoojinayo 10 fps si kor loogu qaadin si aan loo sheegin wax sawir ah oo ku saabsan meesha aad ku duuleyso. Mar walba waxaa jiri doona calaamado u baahan kaliya in badan oo ka badan, laakiin marwalba waxaa jiri doona ficil isku dhafan si looga hortago shilalka barnaamijka illaa iyo inta xitaa runta 64 run ah la sii daayo. Maareynta maskaxda oo ay weheliso faham wanaagsan oo mashiinkaaga ah ayaa aad u dheeraan doonta sameynta FSX madadaalada iyo degenaanshaha.
Waxaan rajeynayaa in tani ay kaa caawineyso waxqabadka oo aad ka dhigeyso FSX barnaamijka casriga ah.